Iziganeko ezibalulekileyo zobufazi Ngama-1960 e-US
Iziganeko ezibalulekileyo ze-United States Ubufazi Ngama-1960
(NgoMeyi 9) Ulawulo lwezoKutya kunye noLawulo lweMithi luvumile ukukhulelwa komlomo wokuqala, owaziwa ngokuba yiPilisi, ukuthengiswa njengokulawulwa kokuzalwa eMelika.
(NgoNovemba 1) Abesifazane Abashaya Uxolo, esekelwe nguBella Abzug noDagmar Wilson, bawabhinqa abafazi abangama-50 000 kwisizwe ngokubhikisha izixhobo zenuzi kunye nokubandakanyeka kwe-Afrika kwimfazwe e-Asia-mpuma.
(Disemba 14) UMongameli uJohn F. Kennedy wakhupha umyalelo olawulayo oseka iKomishoni kaMongameli kwiNkalo yabasetyhini . Wakhetha uMongameli wokuqala u- Eleanor Roosevelt ukusilela ikhomishini.
USherri Finkbine waya eSweden ukuba akhuphe isisu emva kokuba afunde ukuba uThalidomide , isichengechunge esiluthatshileyo esazithathileyo , wabangela ukukhubazeka okukhulu kumntwana.
(NgoFebruwari 17) I-Women's Mystique nguBetty Friedan yapapashwa.
(UMeyi 23) U-Anne Moody, obhala emva kokubhala ukuza kwexesha elide eMississippi , wathatha inxaxheba kwi-counter-in-counter counter-in-counter.
(Juni 10) UMthetho we- Equal Pay of 1963 wasayinwa ngumthetho nguMongameli John F. Kennedy.
(Juni 16) UValentina Tereshkova waba ngowesifazane wokuqala kwi-space, enye yokuqala yaseSoviet kwi -USSR "umgca wendawo."
UMongameli waseMelika uLyndon B. Johnson watyikitya uMthetho wamaLungelo kaLuntu ka-1964, kubandakanywa neCandelo VII ukuchaswa kocalucalulo olusekelwe kwizesondo ngabaqeshi abazimeleyo kuquka i-arhente zengqesho kunye neemanyano.
E- Griswold v Connecticut , iNkundla ePhakamileyo yawaphula umthetho onqanda ukufikelela kweso sokukhulelwa kwezazisetyhini.
I-Newark Museum ibonisa "i-Women's Artists of America: 1707-1964" yabheka ubugcisa bobufazi, kaninzi bengahoywa kwihlabathi lobugcisa.
UBarbara Castle uba ngumfundisi wokuqala wase-UK wesifazane, oqeshwe ukuba abe nguMphathiswa wezoThutho.
(Julayi 2) IKomishoni ye-Equal Employment Commission iqalile ukusebenza.
(UDisemba) UPauli Murray noMary Eastwood banyathelisa "uJane Crow kunye noMthetho: UCalulo loLwesini kunye nesiGaba VII " kwi- George Washington Law Review .
Inhlangano kaZwelonke yabaseTyhini, eyaziwayo njengamanje, yasungulwa.
MSEBENZI ukusekela imisebenzi yokusebenza kwimibutho yabasetyhini abalulekileyo.
UMarlo Thomas waqala ukukhangela inkwenkwezi kwiTV yeTech Girl , malunga nomntu omncinane, ozimele, ongatshatanga.
UMongameli uJohnson utshintshe iSigqeba soLawulo esingu-11246, esijongene nesenzo sokumanyanisa , ukubandakanya ulwaphulo-mthetho ngokwesondo kuluhlu lokuchaswa komsebenzi onqatshelwe.
Iqela labesifazane abaseNew York Radical Women basungulwa kwiSixeko saseNew York.
(Juni) UNaim Weisstein noHeath Booth babambe "isikolo samahhala" kwiYunivesithi yaseChicago kwimicimbi yabasetyhini. UJohn Freeman wayephakathi kwabahlali, kwaye waphefumlelwa ukuba aququze iseshoni yowesifazane kwiNkomfa kaZwelonke yeNtsha yezoPolitiko. I-NCNP ibhinqa yowesifazane, kwaye xa kwakunyanzeliswa ukusuka kumgangatho, iqela labasetyhini ladibana kwihostela likaJo Freeman iqela elaguqukela kwi-Chicago Women's Liberation Union.
Incwadana yeendaba kaJoan Freeman "Izwi lokunyusa inkululeko yabasetyhini" linike igama elitsha.
(Agasti) Umbutho weNational Welfare Rights Organization owenziwe eWashington DC
MANJE wakhiwa ikomiti ekhethekileyo yokuqalisa iphulo eliphambili loLungiso lwamalungelo oLinganayo .
UShirley Chisholm waba ngumfazi wokuqala wase-Afrika-waseMelika okhethwe kwiNdlu yabameli be-US.
I-Women's Equity Action League yaqhekeza ukususela namhlanje ukuba iphephe imiba "yokuphikisana" yobunqunu, ukhetho lokuzala kunye ne- Equal Rights Amendment .
I-League yeNtshukumo Yelungelo Lokukhipha Ilungelo leNational (NARAL) lisekwe.
I-National Welfare Rights Organisation yasungulwa, ngamalungu angama-22 000 ngonyaka ozayo.
Abafazi kwi-Dagenham (UK) iFree factory iqela isiteyimu sokuhlawula okulinganayo, malunga nokuyeka ukusebenza kuyo yonke i-UK Ford izityalo zemoto.
Abafazi kwiqela lokuqala lokukhululwa kwabesifazane baseSeattle emva komququzeleli wesilisa kwi-SDS kwintlanganiso yathi "ukubhola ibhokhwe ndawonye" kwandisa ingqalelo yezopolitiko kumahlwempu amhlophe. Ibhinqa elaliphulaphule labaphulaphuli lalibizile, "Yaye yintoni eyenza ukuqonda kwenkwenkwe?"
(NgoFebruwari 23) I- EEOC yawulawula ukuba ukuba ibhinqa yayingeyona imfanelo yokusebenza ngokufanelekileyo yokuba ngumqhubi wendiza.
(Septemba 7) "I-Miss America Protest" eyenziwa yiNew York Women Radical kwi-Miss America pageant yazisa iindaba eziphathekayo kwiimali zokukhululwa kwabasetyhini.
Isevisi yokuKhupha isisu yeNkululeko yokuThutyuka kwabesetyhini yaqala ukusebenza e-Chicago phantsi kwegama lekhowudi elithi "Jane."
Iqela le- femestist Redstockings laqala eNew York.
(Matshi 21) Ukunciphisa i-Redstockings kwenzelwe ukukhupha isisu , ukugxininisa ukuba ilizwi labesifazane livezwe ngombandela endaweni yowomthetho wabasemthethweni kunye namantombazana .
(NgoMeyi) MANJE amantsholongwane ahambela eWashington DC ngoSuku loMama, efuna "Amalungelo, kungekhona amaRose."
Ingqwalaselo yoBesifazane besithathu
U-Adrienne Rich Of Women Born